Xiliga uu shaqeeyo baasaboorka Norway oo 5 sano noqon karo. - NorSom News
Xiliga uu shaqeeyo baasaboorka Norway oo 5 sano noqon karo.
Wasaarada cadaalada Norway ayaa qoraal hindise harciyeed soo jeedin ah u gudbisay baarlamaanka Norway, kaas oo ku saabsan dhimista mudada uu shaqeeyo baasaboorka Norwiijiga ah, marka qofka loo cusbooneysiiyo ama uu qaato kadib.
Hindise Sharciyeedkan soo jeedinta ah ayaa wuxuu tilmaamayaa in xiliga shaqeynta(jiritaanka) baasaboorka Norwiijiga ah ama jID-kort-ka uu noqon doono 5 sano, iyadoo sidoo kale waxaa laga doodi doono in xiliga shaqeynta baasaboorka loo daayo sida uu hada yaya ee 10-ka sano ah.
Hindise sharciyeedkan ayaa sidoo kale tilmaamaya soo jeedimo cusub oo la xiriira qaabka sawirka qofka ee ku dhegan baasaboorka Norwiiiga ah.
Previous articleBaarlamaanka Britain oo markale diiday meelmarinta qorshaha R.W Theresa May.
Next articleNorway oo hawadeeda ka mamnuucday diyaarada Boeing 737 MAX 8